यौन सम्बन्धपछि महिलाहरुलाई किन पछूतो लाग्छ ? | Rajmarga
कसैसँग यौन सम्बन्ध हुनुलाई सामान्य यौन सम्बन्ध (सेक्स) मानिन्छ । किनकि यसमा रुचिसँगसँगै सहमति पनि हुन्छ । सामान्य यौन सम्बन्धपछि प्रायः महिलाहरुमा पछूतोको भावना आउने गर्छ । यस्तो किन ? हालसालै गरिएको एउटा नयाँ अध्ययनले यदि सम्भोगको लागि महिलाले पहल गर्छिन् र त्यसको आनन्द लिन्छिन् भने उनलाई कुनै पछूतो र खेदजनक भावना नआउने तथ्य पत्ता लगाएको छ ।
यसअघिको अध्ययनमा एक रातको सम्बन्धमा पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुलाई ज्यादा पछूतो र नराम्रो लाग्ने बताइएको थियो । शोधकर्ताले नर्वेको एक विश्वविद्यालयमा ५ सय ४७ र अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा २ सय १६ छात्रछात्रासँग यसबारे अध्ययन गरेको थियो । यसमध्ये कोही पनि समलिंगी थिएनन्, उनीहरुसँगको कुराकानीबाट धेरै कुरा पत्ता लागेको थियो ।
सामान्य यौन सम्बन्धमा पुरुष र महिलाको सोच नै फरक हुने गर्छ । यो अध्ययनअनुसार महिलालाई यदि उनको यौनसाथीले पूर्ण यौन सन्तुष्टि दिनसक्छ भने त्यस महिलालाई सम्भोगपछि कुनै पछूतो भावना आउँदैन । यो अध्ययनमा संलग्न सबै नर्वेको युनिभर्सिटी अफ साइ्रन्स एण्ड टेक्नोलोजी (एनटीएनयू) र युनिभर्सिटी अफ टेक्सासका थिए । सबैको उमेर ३० भन्दा कम थियो ।
पहिलेको अध्ययनमा पुरुषको तुलनामा सामान्य सम्भोगमा महिलालाई कम पछूतो हुने बताइएको थियो । त्यसो त यौन सम्बन्धमा महिलाहरुलाई आफ्नो मर्जी हुँदा र नहुँदाको परिस्थितिले फरक पार्ने गर्छ । यदि सम्भोगको लागि दबाबमूलक निर्णय लिइयो भने त्यसले खेदजनक र पछूतो भावना हुने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।
त्यस्तै सम्भोगमा संलग्न पुरुष साथीको यौन क्षमताले पनि अर्थ राख्ने गर्छ ।
Previous post: प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थिर, केहि दिन अस्पतालमै राखिने !(विज्ञप्तिसहित)
Next post: पतिले जबर्जस्ती यौनसम्पर्क राखेको भन्दै पत्नीले हालिन प्रहरीमा मुद्दा
~ मैले जेजे भन्छु, त्यै त्यै प्रजातन्त्र ! ~